चिसोमा बालबालिकाको खानेकुरामा ख्याल गरौँ | Hamro Doctor News
सोमबार, ५ माघ २०७७ /
नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १९ सय ६५, २ हजारभन्दा बढी होम आइसोलेसनमा
नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २ लाख ६१ हजारभन्दा बढी
नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ प्रकार देखियोः ३ जनामा संक्रमण, अवस्था भने सामान्य
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षा फागुनमा हुने
जन्तेढुंगामा ज्येष्ठ नागरिकलाई घरैमा स्वास्थ्य परामर्शको व्यवस्था
चिसोमा बालबालिकाको खानेकुरामा ख्याल गरौँ
काठमाडौं, २ मंसिर । जाडो महिना बालबालिकाका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ । मौसम परिवर्तनले गर्दा यो बेला विभिन्न किसिमका सङ्क्रमण हुन सक्छन् । जाडोमा रोगसँग लड्ने क्षमतामा कमी आउने भएकोले विशेषगरी बालबालिकामा सङ्क्रमणको समस्या बढी हुन्छ । बिरामी भएपछि बालबालिकाले खानेकुरामा खासै ध्यान दिँदैनन् ।
औषधि सेवन गर्न थालेपछि त खानेकुरा खान खासै मन गर्दैनन् र दिनदिनै सिकिस्त हुँदै जान्छन् । लामो समयसम्म खानेकुरामा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा शारीरिक र मानसिक रुपमा नराम्रो असर पर्न सक्छ । चिसो मौसममा न्यानो लुगाले मात्रै पुग्दैन । पोषिलो खानेकुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
बालबालिकालाई ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउनुपर्छ । त्यसपछि बालबालिकालाई दूधले मात्रै नपुग्ने भएकाले दूधका साथै अरु खानेकुरा पनि खुवाउनुपर्छ । बाहिरका अरु खानेकुराभन्दा पनि लिटो खुवाउनुपर्छ ।
भटमास, गहुँ, चामल, मकै र बदामलगायतका खानेकुरा मिसाउनुपर्छ । त्यसमा अलिकति घ्यू पनि राख्नुपर्छ जसले हाम्रो शरीरलाई चाहिने बोसोको काम गर्छ ।
भिटामिन ए, बी, ई, डी र के जस्ता तत्वसँगै बोसो छैन भने यी तत्वहरु सोस्न पाउँदैन र काम नगर्ने हुन सक्छ । जसले गर्दा कुपोषण हुन सक्छ ।
बच्चा ठूलो हुँदै जाँदा उसिनेको आलु र उसिनेको अण्डाको साना साना टुक्राका साथै दालको झोल र तरकारी पनि खुवाउनुपर्छ । दिनमा आठ पटकसम्म खुवाउनु पर्छ । तर थोरै थोरै खुवाउनुपर्छ । जब बालबालिका दुई वर्षका हुन्छन्, त्यस बेलादेखि घरको भान्सामा जे जे पाक्छ ती सबै दिने गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि चपाउने खानेकुरा धेरै दिनुपर्छ । बाहिर बजारको खाना दिनुहुँदैन ।
जाडो मौसममा सखर हरेक उमेर समूहका लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ । सखरमा खनिज तत्व, लौह तत्व, जिन्क, इन्जाइम र एनर्जी पाइन्छ । यो मौसममा सखरको सेवनले शारीरिक कमजोरी र थकान मेटाउन मद्दत गर्छ ।
ताजा सागपात र तरकारी
मौसमअनुसारको तरकारीजस्तै काउली, ब्रोकाउली, तरुल, गान्टेमुला, सखरखण्ड, कुरिलो र कागतीका साथै विभिन्न किसिमका सागपातको सेवन गर्नुपर्छ । गाजरमा बिटा क्यारोटिन भएकोले बालबालिकालाई काँचो वा पकाएर जस्तो पनि दिन सकिन्छ । झोलिलो सुपले शरीरलाई न्यानो बनाउनुका साथै विभिन्न पोषक तत्व प्रदान गर्छ ।
ओखर, बदाम (नट्स) आलस, तिल
बदाम, ओखर, छोकडा, खुर्पानी अति नै स्वास्थवर्द्धक खानेकुरा हुन् । शारीरिक विकासको लागि, इन्सुलिनको मात्रा मिलाउन, मष्तिस्क बलियो बनाउन, मुटु स्वस्थ राख्न र स्मरण शक्ति बढाउनका साथै बालबालिकाको सम्पूर्ण विकासका लागि यी खानेकुरा धेरै नै उपयोगी हुन्छन् ।
जाडोयाममा माछाको प्रयोग गर्नुपर्छ । किनकि माछामा धेरै प्रोटिन पाइन्छ । यसमा ओमेगा थ्री, फ्याटी एसिड र भिटामिन डी पाइन्छ जसले मुटु रोगको साथै हाडजोर्नीलाई पनि बलियो बनाउने काम गर्छ ।
जाडोयाममा फलफूलको सेवन गर्दा चिसो लाग्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ तर यो गलत हो । यो मौसममा फलफूलको प्रयोग झन् नियमित गर्नुपर्छ । यसमा भएको पोषक तत्व र भिटामिनले धेरै रोगबाट जोगाउने गर्छ । यसले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ । बालबालिकाका लागि मौसमअनुसारको सबै फलफूल उपयुक्त हुन्छ ।सुन्तला, केरा, नासपाती, मेवा, अनार, स्याउ, मौसम, अम्बा, आदिको सेवन सधैँ गर्नुपर्छ । यी खानेकुरा बालबालिकाका साथै अरुले पनि नियमित खाँदा निरोगी बन्न सकिन्छ ।
(विना न्यौपानेले जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर अरुणा उप्रेतीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
Last modified on 2020-11-17 07:37:51
धुलो र धुवाँको संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?
तरुल खानुका धेरै फाईदा
यस्ता छन् तिलको लड्डु खानुका ९ फाइदाहरु...
आँखा सुख्खा हुने कारण तथा उपचार
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत नर्स मृत अवस्थामा फेला
मास्कको उचित प्रयोग नगर्दा संक्रमणको उच्च जोखिम कसरी ? यसो भन्छन् डा.श्रेष्ठ
स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य समूहका कर्मचारी समायोजन
म्याग्नस फर्माले ल्यायो रगत पातलो बनाउने औषधि ''रिभारोक्साबन'' बजारमा
गर्भवती भएको कसरी थाहा पाउने ?
के तपाईंको महिनावारी अनियमित भएको छ ? डा.ज्योति अग्रवाल (स्त्री रोग विशेषज्ञ)
तपाईंको बच्चालाई थालेसीमिया भएको त छैन ! : डा. विशेष पौडेल
दाँत किराले खाएर दुखेको छ ? छुट्कारा पाउँन यसो गर्नुस् ...
नवजात शिशुको ख्याल कसरी गर्ने ? - डा. सुनिलराजा मानन्धर (बाल रोग विशेषज्ञ)
Samples Tested - २०,१६,७५८
&nbspहाम्रो डक्टर न्यूज
Copyright © 2021 - Hamro Doctor News, A Product of Healthy Life Foundation Pvt. Ltd.